Nzira Yekusimudzira Nayo SEO Performance Ne Internal Links - Mazano Anobva Semalt
Zviuru zvemawebsite zvirimo, uye zvakawanda zvakawanda zvinoshandiswa zuva rega rega. Kupikisananokuti kuve paIndaneti kwakaoma. Kuti uve nechepamusoro pamakwikwi ako, unoda kuwedzera nzvimbo yako kuburikidza ne-site SEO. Imwe yeizvinhu zvakakosha zvikuru zve-on-site SEO zviri mukati memaoko - ip камера купить в москве. Zvisinei, vanhu vakawanda havateereri. Inhengo dzomukati dzinobata maitiro ekutsvagaengjini dzinoona uye dzinoona zviri mukati mako uye nharaunda yevashandi.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt ,yakashanda mukati mekugadzira nzira yekuputsa varwi vako.
Nzira Yokuwana Nayo Nhengo dzeNyaya dzeZvikati
Chishandiso chinobudirira chaungashandisa kuunganidza pa-site data ndekudanidzira Frog. Ityakasununguka uye yakabhadhara zvinyorwa. Iko shanduro yakasununguka inoshandiswa kune mawebsite madiki.
Mushure mokunge kutamba kuri kuitwa tinoda kuwana URL yatiri kutsvaga. Kugadziraiyo nzira nokukurumidza, pinda kuguma kwe URL mubhokisi rekutsvaga. Mushure mekunge mawana, tora pa URL yakarurama uye faira ku HTML. Zvadaro, chengeta"in links" pasi peji. Iwe uchawana zvose zviri mukati mahune mu URL yawakasarudza.
Nhanho inotevera ndeyokutengesa zvinyorwa zviri mukati. Kuti uzvitengese, tsvaga pakanangapane URL uye osarudza "Export> Links".
Gezai mukati pekubatanidza
Mushure mokubvisa mukati mehuni, danho rinotevera nderokuchenesa runyorwa. Ndizvozvinokwanisika kuve nekombiyuta ye URLs pamapeji eusononomy uye mitezo yekutevera..Isa ma URL muGoogle Doc uye uronga ivo nerabhaibheri.Mamwe ma URL anongorongwa uye naizvozvo, zviri nyore kubvisa.
Nhanho inotevera ndeyokutsvaga vanhu vanokosha kuti vabvise URL. Kana uri kushandisaMac kushandisa command + F. Nokuti Windows shandisa simba + F kuti uibvise, iwe uchasiyiwa neurusi rwemasangano ekunze uye mamwe magwaro ancho.
Dzidzai Kuvandudzwa Kwemasimba
Nezvenhare dzekunze mazano, iwe uchada kusarudza pa-site zvinhu izvounoda kuongorora. Pano ndiyo nzira yekushandisa.
Shoko rinokosha rinoshandiswa mu URL, anchor text and title tags.
Kureba kwenyaya yacho.
Cherechedza kana chibatanisi chiri papeji yekutanga.
Kana iyo link inowanikwa mumashoko zana okutanga echinyorwa chacho.
Zuva iro nyaya yacho yakabudiswa uye kana yakagadziridzwa.
Shandisa Google Sheet kuti uongorore zvose zvibatanidza uye ureve zvawanikwa.
Nzira yekuishandisa nayo inobva pakuti iwe webhusaiti yako itsva kana yakange iripo.
Kuti uwane webhusaiti itsva, sarudza peji rinotarisirwa uye rishandise kuburikidza nehurukuro inokurukurwapamusoro. Iwe uchanowana hukama hwose uye kuti hwakagadziridzwa sei.
Zvadaro, ita mushure mekuongorora mabhizinesi kuti unzwisise kuwanda kwebasa rinodikanwa peji rekutanga.Shandisa peji yepamusoro kuti uite maonero ehupenyu. Iwe unoda bhadharo reSEMRush rakabhadhara kuti uite chinhu chinonyanya kukosha. Kubva pane ruzivo rwaunosvikanyora chinhu chinokosha chinyorwa chinoenderana nemakwikwi ako.
Tsanangudzo yacho yakasiyana kana iwe une webasaiti iripo uye zvine zvigadzirwa. Kubva kukeywords chisarudze kona yekona yako. Zvadaro, shandisa SEMrush kutengesa vese vatengi uye chengetedza kana pane peji iro ratove rakatarirwa iwekeyword. Gadzirisa peji uye ushandise.
Zvakakosha kuva nekutonga pamusoro pekunze kwako. Zvisungo zvinoshandiswakutsvaga injini kutaurira mapeji aunoona akakosha uyewo kubatsira vatenzi kuti vafambe panzvimbo iyi.